Waa kuwee waa TV iyo movies adeegga ugu wanaagsan Streaming? - Rule News
Waa kuwee waa TV iyo movies adeegga ugu wanaagsan Streaming?
Waxaan is barbar Netflix, Amazon, Sky, Wuki, TalkTalk TV(Blinkbox), Google Play iyo iTunes
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Waa kuwee waa TV iyo movies adeegga ugu wanaagsan Streaming?” waxaa qoray Samuel Gibbs, loogu talagalay the Guardian.com Talaadada 2-da Febraayo 2016 07.00 UTC
Maalmaha ubaahan suulasha anteeno ama satalayt si ay udhacdo TV-gaaga iyo baahiyaha daawashada filimka ayaa muddo dheer dhammaaday. Isku xirnaanta deg-degga ah ee ballaadhan ayaa furmay hab cusub oo lagu helo raalli ahaansho, ka-soo-boodhka siistemyada adeegyada socodka. Laakiin midkee ayaa ugu fiican?
Dhamaan adeegyada qulqulka maahan loo abuuray si isku mid ah. Inbadan ayaa leh maktabado iskuxiran, laakiin qaar badan baa qiimahoodu aad u kala duwan yahay, tayada iyo helitaanka aaladaha aad adeegsato.
Netflix waxay leedahay mid ka mid ah durdurrada ugu tayada wanaagsan iyo taageerada aaladda ballaaran. Sawir: Elise Amendola / AP
Price: £ 5.99 – £ 8.99 bishii
Waxaa laga yaabaa in juggernaut ee tartamayaasha halkan Netflix, kaas oo bilaabay sidii shirkad DVD kirayste ah oo Mareykan ah oo ku biirtay adeegga qulqulka adduunka.
Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa £ 6 illaa £ 9 iyadoo lagu saleynayo imisa shaashad oo aad rabto inaad daawato isku waqti, iyo sidoo kale xalka qulqulka, kaas oo ku dhufanaaya 4K dhamaadka ugu sareeya illaa iyo inta xiriirkaaga internet iyo aaladaha ay xamili karaan.
Awoodda Netflix waa taageeradeeda iskutallaabta-kor u qaadida iyo tayada socodka, taas oo aad uga badan adeegyada kale oo badan. Waxaa jira adeegsi ama qaab lagu habeeyo Netflix qalabkasta oo la heli karo, in kasta oo qaar ka mid telefishanka qadiimiga ah ee caqliga lihi ka reebban yihiin. Netflix waa adeeg socod oo keliya, Si kastaba ha ahaatee, taasoo micnaheedu yahay inaadan kala soo dejisan karin bandhigyo ama aflaamta daawashada tooska ah.
Buugga macluumaadka ee shirkadda ayaa ku kala duwan waddanka. UK, waa yar yahay leh 3,000 filimada waxaa laga heli karaa iyadoo la raacayo xogta laga helo socodka raadinta Unogs. Netflix waxay leedahay magacyo waa weyn oo magacyo cusub oo TV-ga ah oo ay taageerayaan kaliya bandhigyo waaweyn ama caan ah. Aflaanta filimku waxay caadi ahaan soo baxaan bilo badan ka dib marka laga helo TV-ga lacagta. Maktabadda Mareykanka ayaa aad u ballaaran.
Netflix-show ama show gaar ah oo TV-ga ah, oo ay ku jiraan Kaararka, Jessica Jones, iyo Orange waa Madowga Cusub, cadeeyay caan.
Verdict: taageerada ugu fiican ee iskutallaabta-isugeynta iyo tayada socodka, maktabadda Boqortooyada Midowday (UK) aad bay u yar tahay
Amazon Ra'iisul Video Instant
Soo-bandhigayaasha Ex-Top Gear waxay ku yeelan doonaan bandhig baabuur cusub oo ku saabsan Amazon Instant Video oo laga heli karo Prime. Sawir: Amazon / PA
Price: £ 6 bishii ama qeyb kamid ah '£ 79' oo ah $ sanadki Macaamiisha Prime Prime
Adeegga fiidiyowga ee fiidiyowga ee Amazon sidoo kale waddanku waa ku kala duwan yahay. Maktabaddeeda way ku kala duwan tahay Boqortooyada Midowday marka loo eego Mareykanka, tusaale ahaan, laakiin waxay ku darsataa adeegga isdiiwaangelinta oo leh filim iyo TV show kiro ah ama adeeg iibsasho.
Kuwa iyagu iska leh adeegga Prime Prime ee Amazon, Isticmaalayaashu waxay fursad u helayaan inay galaan qayb ka mid ah filimada iyo bandhigyada TV-ga oo badanaa ku jira labada xilli ee ugu horreeya ee TV. Xilliyada soo socda ayaa markaa loo heli karaa lacag dheeraad ah. Xulashada filimkeeda waxay leedahay dhowr soo-bixitaan oo ka-reebid ah, laakiin sida Netflix ayay u qaataan inta badan inay muuqdaan. Maktabadda Boqortooyada Ingiriiska ee bandhigyada caanka ah way ka duwan tahay waxa ku jira laakiin waxay isbarbar dhig ku tahay cabirka Netflix. Waxyaabaha sida weyn loo soo qaatay waxaa ka mid ah Mr Robot, Alpha House iyo daah fur.
Amazon waxay taageertaa qulqulka iyada oo loo marayo dhowr consoles, TV-ga Dabka iyo aaladda kiniiniga, Aaladaha macruufka iyo taageerada biraawsarka. Bandhigyada TV-ga iyo filimada waxaa lagu keydin karaa daawashada qadka tooska ah ee aaladaha macruufka. Caawinta aaladaha Android ee uusan sameynin Amazon waa mid liidata, u baahan geeddi-socod tallaabo badan leh si loogu rakibo barnaamijka fiidiyowga ah ee fiidiyowga ah ee loo yaqaan 'Amazon Video app' ee loo maro dukaanka Amazon Underground, taas oo ay tahay in laga soo dejiyo websaydhka Amazon maadaama uusan ka jirin dukaanka Google Play.
Tayada qulqulka ayaa la mid ah Netflix waxayna ku fidi doontaa ilaa 4K oo ay ku jirto sanduuqa TV-ga Dabka ee 'Amazon's Fire TV'.
Verdict: rukhsad qulqulka qumman, oo leh ikhtiyaar lacag-bixin oo dheeraad ah oo ka dhigaya adeegga ugu dhameystiran
Ciyaaraha Carshiga waa midka ka mid ah show-yada Sky-ka goonida ah kaliya waxaa laga daawan karaa tooska tooska ilaa madadaalada TV-ga. Sawir: Alamy
Price: Filimaanta £ 9.99 (bishii), Madadaalada £ 6.99 (bishii), Ciyaaraha £ 6.99 (maalin), £ 10.99 (toddobaad), bishii (£ 31.99)
Sky's Now TV ayaa loo qaybiyaa seddex adeeg oo kala duwan: Sport, Madadaalo iyo Filim. Mid kastaa wuxuu ku siinayaa inaad si toos ah ugala baxdo kanaalka tooska ah ee Sky, on-baahida content iyo qabsashada.
Madadaalada waxaa ku jira kanaalada caadiga ah ee Sky iyo qaar kale oo aan laga heli karin Freeview, iyo sidoo kale uruurin aad u ballaaran oo bandhigyo telefishanno ah oo la dhigay, oo ay ku jiraan bandhigyada telefishinka ee hadda socda. Filimaanta waxaa ka mid ah filimada Sky iyo si xun 1,000 filimada loogu talagalay daawashada baahida loo qabo, oo ay ku jiraan qaar badan oo sifiican u muuqda ka hor intaysan ku samayn adeegyada kale ee is-qoritaanka. Sportiga wuxuu si toos ah uhelaa toddobo kanaal Sky Sport.
Xirmooyinka TV-yada iyo Filimku waxay leeyihiin faracyada ugu ballaaran ee hadda iyo kuwa cusub iyo filimaanta, laakiin si dhakhso leh ayay u dhacayaan adeegga, markii dambe waxaa ka muuqday bixiyeyaasha kale ee qulqulka sida Netflix. Hada faa iidada TV-ga ayaa ah inay marka hore ka helaan adeega rukumada, badanaa toddobaadyo kadib markii lagu heli karo iibsashada Blu-ray ama DVD.
Hada bixiyaha isboortiga ee TV-gu waa mid gaar u ah bixinta toosinta tooska ah ee ciyaaraha fudud, iyada oo kaliya BT Sport ay bixiso wax la mid ah.
Tayada qulqulka, halka HD, aad uma fiicna sida Netflix ama Amazon mana taageersana qulqulka 4K. Gaar ahaan waxay ka muuqataa ciyaaraha, maadaama heerka jirku uu si muuqata uga liitay baahintii caadiga ahayd.
Taageerada Sky ee aaladda ayaa xoogaa wanaagsan, leh Android fiican, barnaamijyada macruufka iyo qalabka wax lagu qoro, taageerada Roku, qaar ka mid ah telefishanka smart ee LG iyo kumbuyuutarrada isticmaalaya Microsoft's Silverlight. Laakiin taageeradiisu uma eka sidii Netflix.
Verdict: qaali, laakiin leh waxyaabo aadan adigu heli karin ama marin u heli karin adeegyada kale ee isdiiwaangelinta ah
Bogagga Sky Store oo muujinaya Ninka ka yimid Adeerka. Sawir: Dukaanka Sky
Price: ka kiraysaa 99p, ka soo iibsato £ 5.99
Iyo sidoo kale Hada TV-ga iyo Sky Go, taas oo kaliya la heli karo iyada oo qayb ka ah rukhsad dayax gacmeed, Sky sidoo kale waxay leedahay kiro filim gaar ah iyo adeeg iibsasho oo loo yaqaan Sky Store. Kaliya waa filimada, laakiin waxaa ku jira ku saabsan 1,000 filimada leh xulasho adag oo soo muuqda isla waqtiga filimada lagu sii daayo Blu-ray iyo DVD.
Filimaanta laga soo iibsaday Sky Store waxay siinayaan adeegsadayaasha inay helaan HD HD filimka ah, oo lagu daray DVD loo diray gurigooda boostada. Kirooyinka waxay ku jiraan SD-kaliya waxayna ka bilaabmaan 99p. Filimaanta waxaa laga daawan karaa kiniinno kala duwan, kumbuyuutaro iyo sanaadiiqda socodka, laakiin tayada ayaa kala duwan. Fiidiyowga ugu sarreeya ee loo yaqaan '1080i HD HD' waxaa lagu daawan karaa oo keliya sanduuqa 'Sky' HD, tegaayo YouView, sanadkii, Hadda sanduuqyada TV-yada iyo kiniiniyada ayaa u haray illaa 720p. Macsyada iyo Windows Vista ama kumbuyuutarrada duqoobay waxay arki karaan oo keliya waxa ku jira SD.
Verdict: kufiican filimada aad rabto inaad ku iibsato si dijital ah DVD, laakiin inta badan waa tayo ka hooseysa kuwa xafiiltamaan ee aaladda qaarkood
TalkTalkTV – waagii hore BlinkBox – degel muujinaya filim Everest Sawir: TalkTalkTV
Price: laga bilaabo £ 3.49
Horey loogu yaqaanay Blinkbox, Dukaanka TV-ga ee TalkTalk waa telefishan fiiro-wadaag ah laga daawado iyo dukaan kiro filimo ah iyo dukaan iibsi dijital ah. Si ka duwan kuwa kale, Ma jiro ikhtiyaar ikhtiyaar oo rukumasho ah.
Maktabada filinka cusub iyo barnaamijyada TV-yada aad ayey u balaaran yihiin, oo leh tusaalayaashii ugu dambeeyay ee TV-ga sida Marvel's Agents of Shield waxay soo muuqataa badanaa saacado kadib markii laga sii daayo TV-ga.
Kirada ama kirada la iibsaday ayaa laga daawan karaa Android, kiniiniyada macruufka ah iyo kiniiniyada Windows-ka iyo casriga, Google's Chromecast, kumbuyuutaro, consoles marka laga reebo PS4, labo ka mid ah ciyaartooyda Blu-ray iyo inbadan oo ah TV-yada caqliga badan. Aaladaha casriga ah iyo kiniiniyada sidoo kale waxay soo degsan karaan waxyaabaha ka kooban daawashada khariidadda offline.
Isticmaalayaashu waxay leeyihiin ikhtiyaar ah ku qulqulka qeexitaanka caadiga ah ama HD lacag badan, inkasta oo ay kujirto oo keliya 720p oo leh codka "stereo audio", maaha Dolby Digital Plus codka dhawaaqa.
Verdict: maktabad adag oo ah kirooyin ad-hoc ah oo caan ah iyo iibsasho leh taageero dhinacyo badan leh, laakiin maya 5.1 ama 1080p
Websaydhka Wuaki ayaa muujinaya Ant-Man oo leh fursado lagu iibsado ama lagu kireeyo. Sawir: Wuaki TV
Price: kiro ka yimid £ 1.89, ka iibsato £ 4.99
Dukaan kale oo lacag-lagu-daawado ah, Wuaki waxay ku taal Spain waxayna maamushaa shirkad tafaariiqeed oo reer Japan ah Rakuten waxayna soo bandhigtaa ururinta la mid ah ee TV-yada dhowaan la sii daayay iyo filimada kirada ah ama loo iibsado adeegyada kale ee xayeysiinta ah..
Qalabka taageerada waa mid adag, oo daboolaya qalab kala duwan oo la mid ah sida dukaanka TVTTTK, oo ay ku jiraan Chromecast, Madaxweyne Siilaanyo Oo, macruufka, Android EE TV, kumbuyuutarro iyo TV-yada caqliga badan, marka laga reebo waxyaabaha muuqda ee PS3 iyo 4.
Waxaad kala soo degsan kartaa waxyaabaha ka kooban daawashada khadadka kansarka iyo casriga, laakiin waxyaabaha kujira HD laguma ciyaari karo websaydhka, barnaamijyada casriga ah ama kiniiniga ah. Ku soo qulqulaya Chromecast waxay ahayd dhagax adag oo aad u quruxsan, laakiin waxaa la heli karay oo kaliya dhawaqa dhawaaqa.
Waxaa sidoo kale jira xulasho ka kooban waxyaabo bilaash ah oo laga heli karo Viki, kaas oo loogu magac daray "TV-ga caalamiga ee Aasiya iyo in ka badan", iyo dhawr filim oo bilaash ah sida John Travolta's The Boy in the plastic Bubble.
Verdict: ikhtiyaar hufan oo lagu kireeyo filimada iyo telefishan dhowaan la sii daayay haddii aadan haysan shineemo guri oo lagu aasaaso
Filimada Google Play waa qayb ka mid ah Dukaanka Ciyaarta, laga heli karaa kombiyuutarada oo dhan, aaladda iyo qaar ka mid TV-yada caqliga leh iyo sanaadiiqda. Sawir: –/Sawirrada AFP / Getty Images
Price: laga bilaabo £ 1.89
Google filimka iyo dukaanka TV-ga waxaa lagu dhisay isla dukaan ku yaal barnaamijkiisa, muusikada iyo buugaagta loogu talagalay Android iyo aaladaha kale. Play Filimada iyo TV-ga waxay u shaqeeyaan si la mid ah dukaanka TV-ga ee TalkTalk, oo leh fiiro-bixin ah sidaad u fiirsato dalabyada kirada ah ama iibsashada.
Waxay leedahay maktabad la mid ah, oo leh waxyaabo badan oo ugu dambeeyay filimada iyo barnaamijyada TV-ga ee soo baxa ka hor adeegyada kale. Waxay leedahay is dhexgalka adag ee Android, sidaad filan lahayd, laakiin sidoo kale waxay taageertaa sanduuqyada Roku, kumbuyuutaro, Chromecast, Android TV, Apple iPad iyo iPhone iyo kuwa kale.
Tayada qulqulka waa mid aad u fiican ilaa 1080p, halka filimada iyo bandhigyada TV-ga lagala soo bixi karo telefoonnada casriga ah iyo kiniiniyada si ay u daawadaan khariidadda qadka.
Verdict: jaban, la 5.1 dhawaaqa oo ka tayo wanaagsan kuwa ka soo hor jeeda ee mushaharka-aragtida laakiin leh taageero qalab yar
Filimmada iTunes ayaa dib loogu soo celinayaa Apple TV. Sawir: Apple
Price: laga bilaabo £ 1.89 (SD), £ 2.49 (HD)
Dukaanka warbaahinta Apple ee lagu dhisay iTunes wuxuu ahaa midkii ugu horreeyay ee la heli karo welina wuxuu ka mid yahay kuwa ugu wanaagsan. Bandhigyada TV-yada iyo filimada ayaa imanaya isla waqtiga Google Play iyo adeegyada kale ee aragtida lagu bixiyo. Ma jiraan wax bixinno bixinno ah oo la bixiyo, laakiin waad iibsan kartaa ama kiraysan kartaa inta badan sii-deynti ugu dambeeyay iyo waliba waxyaabo duug ah oo badan.
Taageerada aaladda ayaa ku xaddidan qalabka Apple iyo softiweer, oo ay ku jiraan ipadka, iPhone, Apple TV iyo kombiyuutaro leh iTunes rakibay. Bandhigyada TV-yada iyo filimada ayaa lagala soo bixi karaa si loo daawado khariidaynta, waxaana lagu heli karaa 1080p leh Dolby 5.1 dhawaaqa hareeraha.
Verdict: iibsasho tayo sare leh iyo maktabad ijaarasho laakiin leh xaddidan (Apple-kaliya) qalabka taageerada
Kusoo dhawow isbeddelka lixaad ee telefishanka: meelaynta
35349	2 Amazon Ra'iisul Video Instant, Amazon.com, Apple, Qodobka, broadband, Google, Internet, iTunes, Media, Netflix, Dib u eegida, Samuel Gibbs, Sky plc, TeleTalk Telecom, Technology, Television, Warshadaha telefishanka, Video ku saabsan baahida
← Waxaad Orod karaa Windows 95 Inside Your Browser Hadda [PcWorld] Marijuana karto dhibaatooyin Xasuusta Hadal →